Alahady, Septambra 16, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha nanandrana namaky ny bilaogy taloha tamin'ny tranokala finday na finday ianao dia mety ho sosotra ianao. Faly ianao mahafantatra fa nohavaozinay farany ireo kinova ary nanatsara ny traikefa tamin'ny fampiasana WPTouch Pro (rohy afiliana). WPTouch Pro dia vahaolana matanjaka ho an'ny WordPress izay ahafahanao mifehy tanteraka ny kinova finday sy takelakao. Ity ny fizarantsika mitsivalana amin'ny iPhone: Ity ny fizarantsika marindrano amin'ny an
Alatsinainy, Jolay 4, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nisy olona vitsivitsy naneho hevitra momba ny fahitana ny hatsaran'ny bilaogy amin'ny finday. Mahazo eo amin'ny 5% ny mpitsidika anay amin'ny alàlan'ny finday… 2% amin'ny iPhone irery ihany. Zava-dehibe ny manome traikefa an'ny mpampiasa hafa amin'ny alàlan'ny fitaovana… na ny fampiasana Onswipe ho an'ny traikefa iPad tsy manam-paharoa - na ny fampiasana WPtouch Pro ho an'ny traikefa amin'ny finday WordPress amin'ny iPhone, Droid na fitaovana hafa. Fanamarihana: WPtouch Pro dia manohana iPad… fa tsy hoe
Alahady, May 4, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nihaona izahay sy Paul D'Andrea rehefa niasa tao amin'ny ExactTarget. Tahaka ireo mpandraharaha manana talenta maro, Paul dia manana lafiny mamorona sy kanto ihany koa. Ny filàny sary. Ny iray amin'ny sarin'i Coyote an'i Paul any amin'ny fasana iray eo an-toerana dia ao amin'ny Gazetim-bolana Indianapolis Monthly. Ny krismasy lasa teo, izaho sy ny zanako lahy dia nividy fakan-tsary niomerika Nikon D40 SLR ho an'i Katie zanako vavy. Liana tamin'ny sary i Katie ary te handaka izahay